Intsomi yomlingo kwiChurumbelo Waterfall | Ukuhamba kwe-Absolut
Sahamba emazantsi e KholambiyaNgokukodwa ISebe lasePutumayo, Ukuhlangana nenye yezona ndawo zinobugqi eMzantsi Melika. Apho, kufutshane nesixeko sase IMocoa indawo entle yendalo efihliweyo kwaye isongelwe kwi-halo eyimfihlakalo yamabali: uChurumbelo.
Ngapha koko, iChurumbelo ligama leentaba ezihlala ngaphezulu kwe-12.000 eehektare zehlathi. I-labyrinth eluhlaza kunye ne-labyrinth egcwele ubomi apho iikhosi ezininzi zemilambo zibaleka. Le meko iyakhuthaza kakhulu kuye nabani na onombono owonwabisayo wokuyifumana. Iikona zayo ezikude nezifihlakeleyo zezi indawo efanelekileyo yeentsomi namabali.
Intsomi esiza kuthetha ngayo namhlanje inemvelaphi yakudala, nangaphambi kokufika kweSpanish kwilizwekazi laseMelika. Inyani yile yokuba lo mmandla wonke wawunabemi kwiinkulungwane ezidlulileyo yimpucuko yakudala enxulumene nesizwe sangoku se IiNgas (mayingabhidaniswa neeInca), njengoko kungqinwe ziintsalela ezininzi zezinto zakudala ezandiswa kuyo yonke loo ndawo.
Kuyamangalisa ngokwenene ukuba eli bali likwazile ukubuyela umva ngexesha labo kwaye bafikelele kuthi ngenxa yesiko lomlomo labantu bomthonyama behlathi laseColombia. Nantsi into asixelela yona:
1 Ubuncwane bukaChurumbelo
2 ISerranía de la Macarena iNdawo yeNdalo
Ummandla wonke waseChurumbelo ugcwele iingxangxasi neengxangxasi. Abakhenkethi, batsalwe bubuhle bembonakalo yomhlaba kunye nobutyebi bendalo, beza kuninzi lwabo ukuze bonwabele ukuqubha okuhlaziyayo kumanzi acocekileyo akhazimlayo. Nangona kunjalo, abaninzi abazi ukuba enye yazo ifihla into entle ubuncwane.
Ekwindla kwayo, Ingxangxasi yaseChurumbelo, zenziwa ecaleni komlambo Umlambo iPonchayaco, yenza ichibi elincinci elingqongwe lihlathi elishinyeneyo. Umhlaba wasezulwini. Kuthiwa inzulu iyazifihla umfanekiso oqingqiweyo wegolide omile okwimo yomntwana. Into exabisekileyo ekunokwenzeka ukuba yaphoswa apho ukuyifihla ezandleni zabawexuki ababawayo.
IMyuziyam yaseBogotá ibonakalisa amanani egolide afana nalawo anokufihlwa e-El Churumbelo
Ngokomxholo, oothixo behlathi baye banakekela ukugcina obu buncwane kude nabantu abanomdla kunye nabaphangi. Kwaye bakhetha i waties Ngalo msebenzi.
Ngokwesiko lakudala labantu bomthonyama bendawo, iiWat ziyimimoya ehlala ehlathini. Ngabo baququzelela iimvula ezinkulu kunye neengcingo ezinobundlobongela ezihlasele indawo, okwenza ihlathi libe yinqaba eluhlaza engapheliyo. Ikwangabo bhidanisa abahloli bamazwe kunye nabakhenkethi ngezimanga kunye neendlela zokujikeleza. Kuyabonakala ukuba, iiWatíes zilunge ngakumbi kubakhenkethi, abathi babaye eChurumbelo ukuze bonwabele ubuhle bendawo leyo.
Ngaba Yintsomi Okanye Iyinyaniso? Kunzima ukuyithetha, kodwa ngesiqingatha ngokungathandabuzekiyo isiqingatha sokuqhula baninzi abakhenkethi abakhangela ichweba bekhangela ubuncwane ngexesha lotyelelo lwabo kwingxangxasi, bekhangela phakathi kwamatye kunye nemingxunya esemhlabeni. Abanye bathi babonile ukubengezela kwegolide ngaphantsi kwamanzi xa imitha yelanga yayibetha ngqo.
Ngokwemvelo, akukho mntu wakwazi ukufumana nantoni na ukuza kuthi ga ngoku. Eyona nto inokwenzeka, ubuncwane beChurumbelo abukho, kodwa yinto ekungekho mntu unokuyiqinisekisa ngokuqinisekileyo.
ISerranía de la Macarena iNdawo yeNdalo
I-El Churumbelo kunye nobuncwane bayo obuyimfihlakalo belivo zifumaneka ngaphakathi kwemida ye ISierra de Macarena Ipaki yendalo, yenye yazo iipaki kunye noovimba bendalo beAmazon Colombian.
Le paki inemvelaphi yayo Ugcino lwebhayoloji yaseLa MacarenaEsi sithuba siquka ummandla omkhulu wejoloji IGuiana Shield, ngolwandiso oluqikelelweyo lweekhilomitha ezili-130 ukusuka empuma ukuya entshona kunye neekhilomitha ezingama-30 ukusuka emantla ukuya emazantsi.
Ipaki yendalo yeSierra de la Macarena igcwele imihlaba yobuhle obukhulu
ISierra de La Macarena igcina ngaphakathi iintlobo ngeentlobo zemihlaba kunye ne-ecosystems, ukusuka kumahlathi afumileyo nakumahlathi akhukula amanzi ukuya kwiindawo ezikhukulayo kunye neendawo zamathafa aseAmazon. Le mihlaba yindawo yokuhlala yezityalo nezilwanyana ezingenakubalwa, uninzi lwazo lukhona.
Ukongeza kwindalo edlamkileyo kunye neyasendle, eSierra de Macarena Natural Park kukwakho indawo zezinto zakudala kubaluleke kakhulu kwizitya ze Imilambo iDuda kunye neGuayaberoKwafunyanwa iipetroglyphs eziyimfihlakalo kunye neepikogram apho bubungqina benkcubeko yemveli eyayihlala kuloo ndawo kwiinkulungwane ezidlulileyo.
Ngelishwa, inkumbulo kunye nolwazi lwabantu abaninzi balahlekile ngonaphakade. Kubuhlungu, kuba mhlawumbi bangacacisa iinkcukacha zentsomi yaseChurumbelo kunye nomfanekiso wegolide ongaqondakaliyo nonqabileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Intsomi yomlingo kwiChurumbelo Waterfall
ULuz Mercedes Moreno Moreno sitsho
Ndingumboniso, ingxangxasi, ndingathanda ukunxibelelana nawe kuba kumasipala wase-Estrella waseMedellín, kukho isiqwenga somhlaba sikabawo esineengxangxasi ezimangalisayo, kwaye ndingathanda ukwenza iprojekthi yezokhenketho, isiqingatha seyure ukusuka eMedellín.
Phendula kuLuz Mercedes Moreno Moreno
Ndincoma ukuza kwi-putumayo, yi-super bakano, inabantu abahle kakhulu.
I-AUI I-PERREO IDANITIWE, I-PERREO INJA YENKOSI I-PERREO PERREO